Inguqulelo yokuqala ye-Android P ilapha: Yazi iinkcukacha zayo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Android P ngoku isemthethweni: Yazi zonke iinkcukacha
Emva kweeveki zineendaba ezaneleyo kunye nokuvuza, I-Android P sele iphakathi kwethu. Inguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle ifika ngokusesikweni kuhlobo lokujonga kuqala lonjiniyela. Le nguqulo sele ikhona kwaye inokukhutshelwa kwaye ifakwe. Ke sinokwazi iindaba eziphambili zokuba zisishiya.
Emva kokwazi eminye yemisebenzi emitsha eza kusiziselwa yi-Android P. Le nguqulo yabaphuhlisi isinceda ukuba sifumane umbono ocacileyo wenguqulo entsha yenkqubo yokusebenza. Inguqulelo eya kuboniswa ngokweenkcukacha kwiGoogle I / O 2018.
Le nguqulo yabaphuhlisi be-Android P Iyafumaneka kwi iwebhu yabaphuhlisi ukuze ufakelo lwenziwe ngesandla. Nangona olu hlelo lokuqala alufumaneki okwangoku kwinkqubo ye-Android Beta. Yonke into ibonisa ukuba ayizukufumaneka de kufike uhlobo lwesibini ngeGoogle I / O 2018.
UGoogle ngokwakhe uphawula ukuba i-Android P yinguqulelo efuna ukuphucula imiba esisiseko yenkqubo. Umzekelo, ulawulo lwezaziso, inkqubo egcwalisa ngokuzenzekelayo okanye iinkqubo zangasemva, phakathi kweminye imisebenzi.
Sele sizazi iindaba ukuba le nguqulo isizisela. Yintoni esinokuyilindela kwi-Android P?
1 Yintoni entsha kwi-Android P
1.1 Ezinye izinto ezintsha kwi-Android P
Yintoni entsha kwi-Android P
Siqala ngokubeka ngaphakathi endlini usebenzisa i-WiFi RTT. Ukubonelela ngokuma ngokuchanekileyo kuyakhohlisa, ngakumbi nangakumbi ngaphakathi. Into ethi le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza ifuna ukuphucula. Ke ngoko, iyongezwa Inkxaso ye-IEEE 802.11 mc WiFi, ekwabizwa ngokuba yi-WiFi Round-Trip-Time (RTT). Iifowuni ezihambelana nezixhobo zekhompyutha ziya kuba nakho ukusebenzisa ii-RTT APIs ukulinganisa umgama ngokuchanekileyo.
Enkosi kwezi APIs kuya kubakho ukusebenzisa eminye imisebenzi emitsha. Umzekelo, ukukhangela ngaphakathi okanye ulawulo lwelizwi ukwenza usebenze ekhaya ngokuzenzekelayo. Ke ukudityaniswa okuhle kulindeleke kule meko. Ukongeza kwindima enkulu yoMncedisi kaGoogle.
Okwesibini, I-Android P ikwabonisa inkxaso yemveli yenotshi. Abaphuhlisi baya kuba nakho ukusebenza ukuya kuthi ga kubukhulu bayo obahlukeneyo abathathu. Ke lo msebenzi ubonakalisa ukuba inotshi ize kuhlala kwintengiso.
Izaziso zikwangabalinganiswa abaphambili kwakhona. UGoogle wenze inzame zokwazisa ukuphuculwa kokusebenza nokubonakalayo kule nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza. Kuya kuba lula ukukwazi ukwabelana ngemiyalezo esuka kwibha yomgangatho okanye kwibha yesaziso. Ngokuyintloko kuba ukubonwa kwangaphambili komxholo othunyelwe kuthi kuya kwaziswa. Ke ukuba usithumela iifoto okanye iividiyo, sinokubona umbono wazo.
Siza kuba neengcebiso ezikhoyo ngeempendulo. Into eyaziswe nguGoogle kwindawo yokuqala kwisicelo seGmail. Kubonakala ngathi lo msebenzi uthandiwe kwaye usebenze kakuhle. Ke bafuna ukwandisa ukusetyenziswa kwayo kwi-Android ngokubanzi. Ke sibuyela umva ukubona ukuba ziphuculwa njani izaziso. Ukongeza, uyilo olutsha kwibar yesaziso kulindeleke, ngoku luya kujikelezwa ngakumbi.
Ezinye izinto ezintsha kwi-Android P
Le yeyona misebenzi iphambili esiya kuthi siyiveliswe yinkqubo entsha yokusebenza. Kodwa ayisiyiyo yodwa. Zininzi ezinye esinokukhangela phambili kuzo. Nangona le misebenzi ingaziwa kakuhle, okanye ayinangxaki ibalulekileyo. Sikushiya ngezantsi neminye imisebenzi eyongezelelweyo:
Ukuphuculwa kokusebenza kwe-ART
Ukugqitywa okuzenzekelayo ngaphakathi kwezicelo kuya kuphuculwa
I-API entsha yaziswa kwiintlawulo ezihambayo
Ukufikelela kwimakrofoni, ikhamera kunye nazo zonke iisenzi ziya kuthintelwa kwizicelo ezingasemva. Inqaku elalisele livelisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo.
Utshintsho kulawulo lwamandla
Inkxaso yemveli yemifanekiso kunye nevidiyo yeekhowudi (i-HDR VP9 okanye i-HEIF)
I-API yenethiwekhi entsha yokuncedisa ukukhawulezisa iinkqubo zokufunda ngomatshini
I-API yezicelo zomntu wesithathu zokucela ulwazi kwisenzi sesibini kwiifowuni ezinekhamera emibini
Siyabona ukuba zininzi izinto ezinqabileyo kwaye zezona zikwahluka kakhulu. Kuba kukho ezinye ezichaphazela ukusebenza kwefowuni, ngelixa ezinye zigxila kwimfihlo. Kodwa, kubonakala kucacile ukuba I-Android P luphuculo ngeendlela ezininzi.
Olu lwazi lusinika umbono olindelekileyo wento esinokuyilindela kwi-Android P. Ezi ziibrashi ezimbalwa zento yonke le nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza eza kuthi isishiye. Inkampani izinikele ngamandla ekuphuculeni i-Android Oreo. Ke ngokuqinisekileyo kukho izinto ezilindelekileyo kule nguqulo intsha.
Ngokuqinisekileyo ngoMeyi ngexesha lokubhiyozelwa kukaGoogle I / O 2018 siyokwazi ulwazi oluthe kratya malunga nale misebenzi mitsha ngokuchaneka okukhulu.. Eminye imisebenzi eyongezelelweyo inokuziswa. Ngapha koko, siya kuyimamela yonke into ekufuneka ishiyelwe yi-Android P. Ucinga ntoni ngale nto intsha yenkqubo yokusebenza?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » I-Android P ngoku isemthethweni: Yazi zonke iinkcukacha
Amarhe e-Android sitsho
Phendula kwiiRumor ze-Android
UJulian Ns sitsho
Ibalasele… Ngaba i-Huawei yam p10 selfie izakufika ???
Phendula uJulian Ns